Inogona kudzora 30-35% muyero wekutakura! SABIC Syntegon inovaka ultrathin yechando yechikafu kurongedza pamwe chete
SABIC ine yekupakata michina vagadziri Syntegon, firimu mutengesi Ticinoplast uye extruding muchina mupi wePlastchim mushandirapamwe yakatanga chirongwa chakaomeswa chikafu chekurongedza, mhinduro, yekutanga polyethylene (PE) giredhi zvinhu zvakasanganiswa neiyo nyowani firimu yekugadzira tekinoroji.
SABIC yakati, ichienzaniswa neyechinyakare yekuvhuvhuta kuumba PE firimu mhinduro, mhinduro nyowani inopa yakakwira kugadzirwa kushanda, uye iine hutetepa hunowanikwa, zvisinei nemaonero ekusimudzira budiriro kana bhizinesi, rudzi urwu rwekutakura runokwezva.
Iyo yekugadzirisa mhinduro yakavakirwa pakukora kwemakumi maviri emicron singles TF - BOPE membrane chimiro. Sekureva kwemishumo, zvichienzaniswa neiyo iripo yekuvhuvhuta kuumba Pe firimu, Ultra-yakatetepa dhizaini inogona kudzora ingangoita 35-50% yeiyo yekuisa zvinhu.
SABIC inotarisira kuti kubudikidza nekupeta kuonda, kudzikisira kukanganisa kwezvakatipoteredza, uye kudzikisa kushandiswa kwezvinhu zvekurongedza kuteedzera mabrand uye vatengesi kuti vatsigire. Iko kurongedza kunowanikwawo mune imwechete-rukoko PE yekudzokorora marara.
Director webhizimusi reSABIC Europe PE, Stephan Eltink akati: "Ticinoplast Plastchim - T uye Syntegon vabatirapedyo, zvakajairika tikashandisa tekinoroji yavo, vakagadzira mhinduro yeInnovation iyo kugadzikana uye nyore kugadzira, kudyiwa."
Syntegon bhizinesi, musika uye musimboti wegadziriro yekusimudzira masisitimu Pierre Hamelink akawedzera: 1 vane chekuita necheni yekutengesa vanofanirwa kushanda pamwechete, kuti vazadzise chinangwa chebudiriro yekusimudzira, havagone kuzviita vega.
Iyi 20 microns yakatetepa firimu yanga iri Syntegon yakatwasuka ichiumba, ichizadza uye yekuisa chisimbiso muchina yakaedzwa zvinobudirira, muchina unotora yazvino kuvandudzwa kwePHS 2.0 yekuisa tekinoroji, tekinoroji yekuderedza muyero we25% yeiyo clamping membrane, uye kumhanya kurongedza kwakawedzera ne25%.
Ultra-yakatetepa TF - BOPE firimu inoda nguva inotonhorera shoma, sekureva kweSABIC, iyo inogona kuwedzera kuvandudza kumhanyisa kumhanya. Mukuita kwekuyedza, avhareji yemabhegi 130 paminiti
TF - BOPE membrane inoenderana neSABIC LLDPE BX202 nhanho - TF - BOPE inomiririra stenter biaxially yakatarisana polyethylene. Urwu ndirwo rudzi rwe PE kirasi zvigadzirwa, zvinogona kushandiswa mukugadzira biaxially yakatarisana polypropylene (BOPP) firimu stenter iri kushanda.
TF - BOPE inotarisirwa kutsigira chishandiso chitsva chehupfumi hwedenderedzwa nemusika, nekuti mune yakatenderedza hupfumi mamiriro, kuda kwekushandisa mhinduro imwechete yezvinhu kuvandudza kugadziriswazve. SABIC yakati TF - BOPE yakawanda yezvinhu zvekunamatira inogona kutsiviwa neyakagadzika PE chimiro.
Post nguva: Sep-26-2020